आज शनिदेवको उपासना गर्नेले पालन गर्नुपर्नेछ यी ६ नियम, हुनेछ लाभैलाभ — Imandarmedia.com
आज शनिदेवको उपासना गर्नेले पालन गर्नुपर्नेछ यी ६ नियम, हुनेछ लाभैलाभ
आज शनिवार अर्थात भगवान शनिदेको दिन । शनिबार न्यायका देवताको रुपमा मानिदै आएका शनिदेवको आराधना गर्नुपर्ने हिन्दू धर्ममा उल्लेख छ । ज्योतिष शास्त्रअनुसार कुण्डलीमा शनिदोष हुने ब्यक्तिले शनिवार शनिदेवको पूजा गर्नुपर्छ ।
शनिदेवलाई प्रसन्न पार्न कालो सामग्राी चढाउने गरिन्छ । यति मात्र होइन शनि दोष निवारण शनिबार केही चिज भुलेर पनि खान हुदैन । ज्योतिष शास्त्रमा शनिवार यस्ता चिज खादा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख छ । तसर्थ शनिदोष निवारण गर्न शनिदेवको उपासना गर्ने ब्यक्तिले शनिबार निम्न कुरामा ख्याल गर्नुपर्दछ ।
शनिबारका दिन माछामासुजन्य तामसि भोजन गर्नुहुँदैन । तामसि भोजनगर्दा शनिग्रहको नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । शनिबारका दिन मदिराको सेवनगर्न पनि बर्जित रहेको छ । यस दिनमुसुरोको दालको प्रयोगलाई नकारात्मक मानिएको छ । शनिवारका दिन दुधको समेत सेवन गर्नु हुदैन । यसले काम भावना जागृत गर्दछ ।
शनिवार अचार या अमिलो चिज पनि खान वर्जित गरिएको छ ।
आज तपाईको भाग्यफल कस्तो छ ? हेर्नुहोस् असार १ गते मंगलबारको राशिफल
सोमबार यी पाँच काम गरे हुन्छ मनोकांक्षा पूराॐ ॐ लेखि सबैले सेयर गरौं ॐ ॐ
आज सूर्यग्रहण लाग्दै, नेपालमा कतिको पर्दैछ असर
घरमा लगाउनुस् यी विरुवा धन आगमनकाे साथै घरमा शान्ति तथा गुडलक प्राप्त हुनेछ
कुन राशिका लागि आजको दिन शुभ ? पढेर थाहापाउनुहोस्
मंगलबार कुन राशिका लागि कति शुभ ? पढेर हेर्नुहोस्
किन बस्ने आइतबार सूर्य देवको व्रत ? (मन्त्रसहित)
आज १२ बजेपछि यी राशिको चम्किदैछ भाग्य, २०७७ साउन ८ गते बिहीबारको राशिफलसहित
शनिबार यी काम गर्नुहोस्, भाग्योदय हुनेछ